ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ကြယ်ကြွေမိုး
တချို့ က ဆုတွေတောင်းလို့၊ တချို့ က နိမိတ်ဖတ်လို့
တချို့ က သင်္ခါရတွေကို နှလုံးသွင်းလို့
တချို့ က.. ၊ တချို့ က..
သူ့ကိုယ်သူ လောင်ကျွမ်းရင်း သူတပါးအတွက် လမ်းပြသလား
သူ့ဒေါသတွေ သူဖောက်ခွဲ အလင်းတန်း အပူတွေ ဖြန့်ဝဲသလား
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့
ဖြစ်တည်မှု တစ်ခုရဲ့ ဇာတ်သိမ်း အရာရာ ပြတ်ငြိမ်းခဲ့ပေမယ့်
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါကွယ် ကြယ်အလုံးရေ တရာကျော်သတဲ့
အတူတူ ကြွေဖော်ရှိလို့ ငါ အားကျတယ်
သီချင်းကို ဒီမှာ နားဆင်ပါ
Jeffrey Berkes, East Smithfield,PA
Mark Golub, Riding Mountain National Park, Manitoba, Canada
Joe Westerberg, Joshua Tree National Park, California
Pete Lawrence, Selsey, West Sussex, UK
ဒီမနက် ကောင်းကင် မြေပုံ
http://www.spaceweather.com/meteors/gallery_12aug07_page2.htm မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 5:58 AM
ဟယ်….ကြယ်တွေ….အများကြီးဘဲ….လှလိုက်တာနော်…. ဒါကြောင့် မပန်က သတိပေးတာ…. ခေါင်းပေါ်ကျရင် ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးနော်……
မှတ်မှတ်ရရ သိုးလေးအသက် 22 ထိ ကြယ်ကြွေတာ ဗွီဒီယိုထဲမှာပဲ မြင်ဖူးသေးတယ်။ ဒါ မတိုက်ဆိုင်သေးလို့နေမှာနော်။ အရမ်းကို အပြင်မှာ ကြည့်ဖူးချင်တယ် မမရယ်။